अहिलेका नेता फेर्यो भने सधैंको किचलोबाट निकास निस्केला त?-BBC Sajha sawal ~ Khabardari.com
अहिलेका नेता फेर्यो भने सधैंको किचलोबाट निकास निस्केला त?-BBC Sajha sawal
शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएन, संविधान पनि लेखिएन । दलहरु झन् विभाजित अवस्थामा पुगे । यसले गर्दा देशको अर्थतन्त्र पनि अघि बढ्न सकेन । यस्तो हुनुमा अहिलेका नेताहरूको दृष्टिकोण र क्षमतालाई प्रश्न उठाइन्छ । के त्यसो भए अहिलेका नेता फेर्यो भने सधैंको किचलोबाट निकास निस्केला त? सहमति भन्ने शब्द बिगत ४ वर्षदेखि नेताको मुखबाट सुन्दा सुन्दा नेपालीहरु दिक्क भइसके । तर ब्यवहारमा भने आ-आफ्ना मोर्चा बनाएर दलहरु झन बिमतितर्फ अघि बढ्दैछन । के समस्या भनेको अहिलेका नेता नै हुन् त? साझा सवालको यो छलफलका लागि मेगा बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाह, एमाओवादी नेता देबी खड्का, कांग्रेस नेता महेन्द्र यादव र एमाले नेता योगेश भट्टराई ।
Courtesy: BBC sajha sawal.